ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကောင်းပြီ၊ ငါ porn ဖြတ်ပြီးမှသာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါငါဘယ်လိုသိလဲ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကွဲပြားမှုရှိသဖြင့်ဤကိစ္စအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေမရှိပါ။ ဘုံရည်မှန်းချက်များတွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ လိင်စိတ်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းလိင်အင်္ဂါအကောင်ရေများလျော့နည်းလာခြင်း၊ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ခြင်း၊
သင်၌အားကြီးသောခြင်းမရှိဘဲ, ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲ masturbate နိုင်ပါတယ် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု.
တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစိတ်ကူးခံစားရ (မှတ်ချက်: သင်ပထမဦးဆုံးမှာ PE သို့မဟုတ် DE အနည်းငယ်ရှိစေခြင်းငှါ။ )
နမ်းပျော့ (သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့) စိုက်ထူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သငျသညျနံနက်သစ်သား (သို့မဟုတ် "semis") မကြာခဏရတဲ့နေကြသည်။ သို့သော် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်စုများကိုတွေ့မြင်.
Semen ယိုစိမ့် (ရှိပါက) ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။
ပညာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောသူတို့အဘို့, ထွက်ရှိသောသင်မကြာခဏ orgasm မှကျောက်အစိုင်အခဲစိုက်ထူနှင့်အတူ masturbate နိုင်ပါတယ် porn, ဒါမှမဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ။ မြင် ငါလိုက်တဲ့အခါစမ်းသပ်သလဲ?
Flashbacks (အချို့ယောက်ျားတွေအတွက်) ကိုပြောင်းလဲ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က“ အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှ flashbacks တွေဟာအစောပိုင်းနဲ့အစောပိုင်းက porn အတွေ့အကြုံများမှဖြစ်သည်။ ငါလုံးဝမေ့လျော့သောများစွာသော ၎င်းသည်အလွှာများကိုပြန်လည်ဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဤတွင်ကျွန်မများစွာသောလူ NoFap နှင့် NoPorn ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြတ်သန်းသွားမြင်ကြပြီကြောင်းညွှန်ကိန်းများစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာအများအားဖြင့် flatline ကာလပြီးနောက်၎င်းတို့၏အင်အားအကောင်းဆုံးမှာရှုမြင်ကြသည်ကိုသတိပြုပါ။
2.You အောက်ပါနေ့ရက်ကာလ၌ခိုင်ခံ့သောရမ္မက်မလိုဘဲ masturbate နိုင်ပါတယ်။
3.Your flaccid အရွယ်အစားအနိမ့်ဆွဲထားတဲ့။
4.Semen leakage သို့မဟုတ် Pre-cum မှာအားလုံးလျော့နည်းသို့မဟုတ်မတွေ့ကြုံတတ်၏။
5.Porn-သွေးဆောင် ED, နှောင့်နှေးသုက်, ဒါမှမဟုတ်အချိန်မတန်မီသုက်လက္ခဏာတွေလျော့နည်းဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာညှိုးနွမ်း။
အမျိုးသမီးများ၏ 1.Your အမြင်တစ်ဦးကျန်းမာပုံစံသို့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
porn မြင်ကွင်းများမှ 2.Flashbacks နောက်ဆုံးမှာညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့်ရှားပါးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
3.Cravings သွားဘယ်တော့မှစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်အချိန်နှင့်အတူသူတို့စီမံခန့်ခွဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘ ၀ ၌“ သေးငယ်သောအရာများ” သည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလာလိမ့်မည်။
မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn နှင့်မချိတ်ခင်မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်မဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုသတိပြုပါ -
ကြည့်ဖူး အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (ED) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ သင် reboot လုပ်ပြီးနောက် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင့် ဦး နှောက်သည် sensitivity ကိုတိုးပွားစေပြီးနောက်) porn မပါသော orgasm သည်ညစ်ညမ်းသော orgasm ထက် ပို၍ ပြင်းထန်လိမ့်မည်ဟုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာအရာရာကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရုပ်ပုံလွှာမျိုးစုံကိုချန်မထားလို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော်ဂဇင်ဟာပြင်းထန်မှုနည်းလေလေ၊ (သင်၏ dopamine များများလေလေသင့် ဦး နှောက်သည်ခဏကြာလျှင် - ပုံမှန်အားဖြင့်လျှော့ချနိုင်လေဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုပိုလိုချင်လာသည်။Chaser။ ")
သို့သျောလညျးအကြီးအ orgasm များမှာ မင်းရဲ့အနာဂတ် သင့်အနေဖြင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုလေ့လာရန်သာလိုလိမ့်မည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်အခြားအာရုံကြောဓာတုဗေဒအပျော်အပါးဓာတုပစ္စည်းများစွာကိုရရှိပြီးအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ သို့သော်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ရလဒ်သည်သင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပိုမိုရရှိစေပြီးသင်၏ ဦး နှောက်သည်ရွေးချယ်စရာအသစ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်။ စိတ်ရှည်ပါ၊ မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမည့်အစားစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။ သင်လုပ်ငန်းစဉ်၌စုံတွဲတစ်တွဲ / လအနည်းငယ်အထိစမ်းသပ်ခြင်းမပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခု နေ့ ၁၂၀ တွင်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည်။
သင်စဉ်းစားရမည့်အရာမှာ“ ဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ED သည်ပိုကောင်းလာသလောသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းပြချက်မရှိကိုယ်တိုင်နှိပ်စက်နေခြင်းလော။ ” ဖြစ်သည် ငါလည်းစဉ်းစားမိတယ် အဖြေက 'ဟုတ်တယ်'၊ သင်တွေ့ကြုံရမည့်အရာသည်သင်၏လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဘာလဲ နှင့်အမှန်တကယ်လိင်လိင်၏ဖြစ်ခြင်း၏အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်“ rewiring” လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသေခြင်းတရားသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသလား။ ငါလည်းလုပ်ခဲ့တယ် လိင်သည်ဤအရာနှင့်လုံးဝမနီးစပ်ပါ။ ၎င်းသည် reboot နှင့် rewire ပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လမ်းဆုံးဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပင်စကားလုံးများကဖော်ပြရန်လို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့်သင် sputter နှင့် backfires အနည်းငယ်ရှိပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသင်ဆလင်ဒါအားလုံးအပေါ်ပစ်ခတ်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ rewiring ဖြစ်စဉ်ကိုရှိလိမ့်မည်။ အခုလား။ သုည ED၊ ငါတောင်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ တကယ်တော့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ နင်ကနင့်ကိုမနင်းသေးဘူးနင်ငါလိင်၊
အနည်းဆုံးအားအကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျများစွာသောအခြားအဖြစ်ကောင်းစွာရေးမြင်ကြပြီပြန်ရတဲ့လိင်စိတ်၏တစ်ဦးကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာ, သင်၏ flaccid အရွယ်အစားကြီးထွားဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်နှငျ့နံနကျသစ်သားမှန်မှန်ပြန်လာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ hornier ခံစားရစတင်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကယောက်ျားတွေခဏအော်ဂဇင်ပြီးနောက် neurochemical ရက်နာသတိထားမိဒါကြောင့်စိတ်ရှည်:
ငါ PMO မရှိသည့် ၅၆ ရက်ကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်ဗလာ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဒါပေမယ့်ဘာထင်လဲ ဒီခြောက်လကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါဟာနုပျို / ကျပန်းစိတ်ကျဆင်းမှုကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလို့နောက်ဆုံးမှာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဦး နှောက်မြူမှုန်လေးကအခုကျွန်မရဲ့တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာပါ။
မှတ်သားရန်တစ်ခုမှာကြီးမားသောအမှတ်ဈလိင်ခဲ့လျှင် 14 မှတစ်နေ့လျှင် 60 အကြားကိုယ့်ကိုတကယ်ညှစ်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်နောက်တဖန်အမြစ်ယူဖြစ်ခြင်းမယ်လို့ခံစားမိလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်ယခုလိင်တစ်ဦးရင်းနှီးအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုဖြစ်ပြီးနောက်မှပီတိလန်းဆန်းခံစားငါ့ကိုအရွက်။ ၁၂၇ ရက် - လိင်ကိစ္စကိုမကုန်တော့အောင်၊
စစ်မှန်သော လိင်စိတ် စွဲ-ဆက်စပ်နှိုင်းယှဉ် မတရားသော
rebooting ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်သင်တို့၏လိင်စိတ်စစ်ခြင်းတို့အကြားကွာခြားချက်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါမှတ်တမ်းကကောင်းစွာရှင်းပြသည် -
ငါလုံးဝမ PMO ၏6ပတ်ဖြည့်စွက်တော့မည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါထင်တဖြည်းဖြည်းပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်မှတဆင့်တကယ်တသမတ်တည်းသော "flatline" ထဲကနေထွက်လာပြီ။ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတုန်းက porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုသတိရမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိုက်ထူမှုတောင်မှတောင်မှတောင်မှမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါကျွန်တော့်ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ အခု၊ ငါယောက်ျားတွေကိုမင်းကိုစိတ်ချစေချင်တယ်၊ သင်က porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခံစားရတဲ့အရာဟာမင်းရဲ့အမှန်တကယ်လိင်စိတ်မဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းမှုသာဖြစ်တယ်
ကျွန်ုပ်၏ libido စစ်မှန်မှုသည်လွန်ခဲ့သော ၅ ရက်ခန့်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာငါ PMO နှင့်ပတ်သက်။ ခံစားခဲ့ရသောအရာနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်အိပ်ရာပေါ်၌နမ်းနေခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်းကိုကျွန်မမှတ်မိသည်။ သူမကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေပြီးကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားသင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အကောင်းဆုံးမှာကျွန်ုပ်တိုတောင်းသောအချိန်လေးများအတွက် ~ 5% စိုက်ထူမှုရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်မနေ့ကသူမနှင့်နမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုချိုချိနဲ့အောင်ခံစားစေပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပို၍ တုံ့ပြန်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်အနမ်းနှင့်ချစ်ခြင်းမှသာလျှင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ သူတို့ယခင်ကထက်နှစ်ဆပိုကြာရှည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့မနေ့ကအိမ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဟာချိုချိုလေးနဲ့ခံစားရတယ်၊ နှစ်တွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့တော့ porn အကြောင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာနဲ့မတူဘူး။ ဒါဟာအစစ်အမှန်အရာများအတွက် horniness ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံလျှင်ငါ (အနည်းဆုံးလုံးဝလုံးဝမဟုတ်) ကျရှုံးလိမ့်မယ်တဲ့အမှတ်ရတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါ ၁၀၀% မရှိသေးဘူးဆိုတာငါသိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပိုပြီးစောင့်ချင်တယ်။
တစ်ဦးတည်းနှစ် Fapstronaut အားဖြင့်နောက်ထပ်ရှုထောင့်: “ မင်းကိုတကယ်တမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရမယ်။
ဝေးသွားမရ Integrated horniness ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို ၁၁ နှစ်ကြာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအားနည်းနေတဲ့ဒင်ချိုင့်ဝှမ်းဟာမင်းမှာမြင်ရတဲ့ချိုင့်ဝှမ်းဟာလုံးဝမချိုသာဘူးဆိုတာမင်းသိမှာပါ။ ဒါဟာ fap စွဲလမ်းမှုကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းပေါ်လာတဲ့အပေါ်ယံနဲ့အတုချိုသာမှုပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ခဏတစ်ဖြည်းဖြည်းဆည်းပူးလာမည့်ဤချိုင့်ဝှမ်းသည်အထီးတိုင်းတွင်ရှိသင့်သောအထီးကျန်မှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ငါပူနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့မင်းရဲ့နှလုံးသားတွေပြင်းထန်စွာတုန်နေသည်ကိုတွေ့သောအခါငါအသက်ရှူကျပ်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts/rebooting-accounts-page-11/age-1-harder-longer-lasting-erections-strong-urge-for-real-women-greater-confidence/
·ညစ်ညမ်းသောလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတွန်းအားပေးသည်ဟုမခံစားရပါ။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးတစ်ခုအတွေး nary ရှိသည့်ရက်ပေါင်းရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မျှော်လင့်နေပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမှသင်ယူခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ fetishes များသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအတုယူဖို့ကြိုးစားတာထက်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လိင်ဆက်ဆံတာကအဆင်ပြေပါတယ်။ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ 150 ရက်ပေါင်း
ငါ NoFap စဉ်အတွင်းသင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တစ်ခုငုပ်လျှိုးနေမျိုးရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကြောင့်နေ့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနှိုးနာရီမှာတငျပွမရနိုင်ပေမဲ့, ငါ porn ကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် Manic အဆင့်စဉ်အတွင်းအခါကဲ့သို့ငါ (ယနေ့ပြုနေဆဲ) မယ်လို့သတိပြုမိပါကငါ့ထံသို့ပေးအပ်သည်အခါအလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကတေဲ့အတှကျဝါသနာတူခံစားရ, မဖွင့်မရသောအခါအသေးလုပ်ပါ။ ငါဖြစ်သင့်သည့်အခါအပေါ်တာနဲ့အပြန်အလှန်။ အသက် ၂၅ - ကြံ့နှင့်သက်တံ့ရောင်မဟုတ်ဘဲမြက်ပင်သည်စိမ်းလန်းစိုပြည်သည်
PornFree ကိုလုပ်နေစဉ်မှာငါသတိပြုမိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးအရာကတော့ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲငါ PMO ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်လုပ်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်လောက်အံ့သြသွားတယ်။ ဒါကအဓိကအားဖြင့်ငါကအိမ်မှာပျင်းနေတုန်းမှာ porn ကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်က porn ကိုဖြတ်တောက်မယ်ဆိုရင် fap လိုချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး။
nofap မတိုင်မီကကျွန်ုပ်အတွက်လိင်သည်ရေသောက်ရန်ရေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းခဲ့သည်မှာယခုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်ပျက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုအခါလိင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် gf နှင့်အတူမကြာခဏအိပ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ချိုသာသောကြောင့်၊ ငါတိုက်တွန်းချက်များကြောင့်, ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသာ fuck ဆိုတဲ့ရန်ရှိသည်သောခံစားချက်မရှိတော့ပါ - ဒါပေမယ့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲပျော်မွေ့နိုင်လျှင်သာဖြစ်နိုင်သည်။
nofap မတိုင်မီနှင့်ယခုလိင်မှု၏အဓိကကွာခြားချက်မှာကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်သောအခါ၎င်းသည် ပို၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာပြီး ပို၍ အရေးတကြီးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ယခု၎င်းသည် ပို၍ သိမ်မွေ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏အတွင်းပိုင်းအသိသည်ဖွံ့ဖြိုးရန်အချိန်ယူသည်၊. http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2uivqg/how_i_beat_pied/co8wsa7
porn စောင့်ကြည့်ဖို့, ဒါမှမဟုတ် masturbate ဖို့တိုက်တွန်း, ကျန်းမာ, သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇပေမယ် dopamine-စွဲတစ်ခုစကားရပ်၏အသုံးအနှုနျးမြားမဟုတျပါ။ သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များကိုဘယ်တော့မှအကြမ်းဖက်များနှင့်ခုခံတွန်းလှန်ဖို့မခက်ခဲ, နာကျင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က, သာယာပျော့နှင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ကနေအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအကြမ်းဖက်တတ်ပြီးနှင့်အော်ဂဇင်၏စူးရှသောလိုအပ်ကြောင်းကိုနောက်တဖန်မသောက်ကြူး၏ရေငတ်အရည်များအတွက်သဘာဝဝယ်လိုအားထက်သဘာဝဝယ်လိုအားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနောက်ဆုံးတော့ပုံမှန်ကျန်းမာလိင် drive ကို၏အသုံးအနှုနျးမြားခံစားရသောအခါအသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ပိုကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို masturbated ကြလျှင်,, သင်ဖြစ်ကောင်းအစဉ်အဆက်မတိုင်မီကြုံတွေ့ဘယ်တော့မှတစ်ဦးဇာတ်ကောင်များ၏ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, ဒီမှတ်မိပေးပါ။
ဒီမှတ်မိ ကျေးဇူးပြု. , လိင်ဗီဇသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်မှုအတွက်ထိန်းချုပ်ရပါမည်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ သငျသညျနောက်ဆုံးတော့ဒီစွဲလမ်းကနေအခမဲ့ကိုချိုးဖျက်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်စတင်သည်, ဤအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဦးနှောက်က၎င်း၏ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပြည်နယ်ပြန်သောအခါ, ထို့နောက်သင့်ရဲ့လိင် drive ကိုနောက်တဖန်ပုံမှန်ကျန်းမာကြလိမ့်မည်။ သာမန်ဗီဇအတိုင်းထိန်းချုပ်ထားသို့မဟုတ်ခုခံ, စစ်တိုက်ခံရဖို့မလိုပေ။ သူတို့ကရိုးရှင်းစွာရှိပါတယ်သူတို့သည်သင့်နှောငျ့ယှကျဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းကိုစွဲလမ်းနေတဲ့နေရာတွေမှာပြလို့ပါ။ သင်တစ်မိနစ်လျှင်အချိုရည်လေးလီတာသောက်ရုံမျှသာရရန်ရေငတ်သောကြောင့်ရုတ်တရက်ရောက်သွားသလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါပြောနိုင်တယ် မဟုတ် ရေများအတွက်ဇီဝကမ္မလိုအပ်ကြောင်းမွေးဖွားငတ်ခံတစ်ဦးကပုံမှန်သဘာဝအသိ။ အဲဒီစွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာအဘို့ဤအကြမ်းဖက်တဏှာ get ပါသလား ဒါဟာအဆိပ်အတောက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖြစ်ပါသည်, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအထက်လည်ချောင်းထဲမှာမဟုတ်, အစာအိမ်အတွက်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါဟာသာယာသော, tingling ခံစားမှုနှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်လူတစ်ဦးတစ်ဦးအလုအယက်၌မိမိစားစရာကိုမျိုဖို့, ဒါပေမယ့်စနစ်တကျပြုလုပ် masticate နှင့်၎င်း၏အရသာခံစားချင်ပါဘူး။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှအမြန်အစာအိမ်ကိုဖြည့်ဖို့အကြမ်းဖက်စူးရှသောလိုအပ်သည်မဟုတ်, မိမိကိုယ်ကိုအာဟာရရန်နှင့်ပိုမို mastication, ပိုအာဟာရ။
သူအပေါငျးတို့နာကျင်အကြမ်းဖက်မတရားသောနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်သောဇာတိပကတိနှင့်တောင်းဆိုချက်များကို၏သဘာဝအများနှင့်ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေမယ့်အမြဲမရှိခြွင်းချက်, မတရားသောစွဲလမ်းနှင့်သဘာဝသံသရာထဲကမွေးဖွားကြသည်ကြောင်းကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ သင်ပိုကောင်းသူတို့ကိုတွန်းလှန်ကြဘူး။
[ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံး6ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း 7-90 စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ] ပထမဆုံးအနည်းငယ်အလွန်အကဲဆတ်ဖြစ်ကြသည်နဲ့ကျွန်မပြန်ရောက်သွားတယ်ခဲ့သောခံစားချက်ငါ့ကိုနှိုး။ အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်အရှိဆုံးမကြာသေးမီသူတွေကိုပိုပြီးချ toned နေကြသည်ရှိရာအမှတ် rewired ကြပုံရသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏အပြောအဆိုနှင့်အပြုံးသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ငါဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်
Erotica နှင့်တစ်ကိုယ်တော်လိင်ပင်လျော့နည်းနှစ်သက်ဖွယ်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက် (လိင်) ထက်ဖြစ်နိုင်သည်:
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီး၏လက်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မတူသည့်အချက်ကိုနောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ထိမိသောအခါတုံ့ပြန်မှုသည်လျစ်လျူရှုမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ငါခဏထွက်အလုပ်လုပ်, အချို့ရလဒ်ရနိုင်, ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်အားဖြင့်ငါ့စိတ်ပုံမှန်အားဖြင့်လမ်းလွဲခဲ့သည်။ ယေဘုယျအား, မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မှု၏သှေးဆောငျပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာငါကလုပ်နေတာ၏မစဉ်းစားသည်မဟုတ်, ငါစဉ်းစားတာကိုမလုပ်ချင်ဘူး၊ ငါလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကအများကြီးမရတော့ဘူး။ အဲဒါအဆင်ပြေပေမယ့်မကောင်းဘူး အစားအစာအကြား snacking နဲ့တူတယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်လုပ်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တင်းကြပ်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ erotica ကိုကြိုက်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးမဖြစ်စေဘူး။ ဒီဟာကထိတွေ့မှုအလွန်များပါတယ် ဒါဟာ titivating စဉ်သုံးခုကိုအစားထိုးဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုရှုထောင့်တစ် ဦး နှုတ်ထွက်သဘောပေါက်ပိုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလိုသည့်ဆန္ဒသည်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အခြားနေ့ရက်တိုင်း၌လည်းကျဆင်းလာသည်။ ယခုမူကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောကြီးမားသည့်အခြားအပတ်တိုင်းကဲ့သို့တွန်းအားဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့လိင်ဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာထက်ဆယ်ဆပိုကောင်းသလိုခံစားမှုသာမက၊ ငါဟာဘဝကိုပိုပြီးပျော်မွေ့နေတယ်။ စိတ်မကောင်းတော့ဘူး။ ငါဟာအသက် ၄၀ အရွယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရလိမ့်မယ်။ အသက် ၂၀ - ED - လိင်ကိစ္စသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက်ဆယ်ဆပိုကောင်းသည်သာမကကျွန်ုပ်သည်ဘဝကို ပို၍ နှစ်သက်သည်
အခြားလူတစ်ယောက်ကဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏စိုးရိမ်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။flatlining":
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မပူပါနဲ့၊ ရှောက်သွားလိမ့်မည် ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေကိုယ့် ဦး နှောက်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဝါယာကြိုးအသစ် (ဥပမာပြောရရင်) ကိုချိန်ညှိဖို့အချိန်လိုအပ်တယ်၊ ပြီးတော့သူရဲ့လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်ရယူဖို့အချိန်ယူရမှုသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားမှုရှိလိမ့်မယ်လို့ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ libido ရောဂါပျောက်ဆုံးနေသည်မှာ ၆ လရှိပြီ။ သို့သော်ပြန်လာသောအခါ၎င်းသည်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလိင်စိတ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးကိုလိင်ဆိုင်ရာကြည့်ရှုလိုစိတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဆက်လုပ်ပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့ရေရှည်တွင်သင်၏ဘဝပြောင်းလဲခြင်းရွေးချယ်မှုသည်အသီးကိုသီးလိမ့်မည်။
PE reboot လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် PE ကိုစိတ်ပူပါသလား။
ဤတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ reboot လုပ်သောယောက်ျားများသည် ejaculating ပြီးနောက်သူတို့၏စိုက်ထူမှုများကိုခံလိုက်ရသည်။ orgasms သည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် PE သည်“ bug” ထက်“ feature” ၏ပိုသည်။
အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း -“ ငါတိုက်ခန်းတစ်လုံးထဲရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” (နှင့်အခြားအစီရင်ခံစာများ)
သင်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်ရံဖန်ရံခါအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူခြင်း (အသက်အရွယ်အလိုက်မှီခိုမှု) ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေရှည်နှေးကွေးသောစိုက်ထူမှုများရှိသည့်အချို့သောယောက်ျားများသည်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူ:
ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာကိုသိချင်တဲ့လူတိုင်းအတွက်ပထမဆုံးပြောရမယ့်အရာကအလိုအလျောက်ပေါ်ထွက်လာတာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်မင်းကငါလိုမင်းနဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့မတွေ့ဆုံခင်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ချိတ်ဆက်စေခဲ့ရင်၊ အဘယ်အရာကိုငါ့ကိုချွတ်ငါတကယ်ဖြစ်နိုင်သောလိင်၏စိုက်ထူရတဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဒီပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုမကြည့်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုမလိုအပ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုပေးပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတယ်။ ငါညစ်ပတ်တဲ့စာရိုက်တာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့လိင်တံကရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလာတယ်။
ဒါကတသမတ်တည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့တောင်မှငါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစာပို့နေတယ်။ သူမနဲ့အတူပရောပရည်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သံသယတစ်ခုပဲ၊ ထိုအခါအောက်ထပ်ဘဝရှိ၏။ ငါအပြည့်အဝစိုက်ထူတယ်ဘယ်တော့မှပေမယ့်နောက်တဖန်ငါတ ဦး တည်းမလိုအပ်ခဲ့! ငါတစျခုလိုအပ်တဲ့အခါငါကအဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နံနက်တောအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုမရှိနိုင်ပါ၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိလျှင်ကျောက်တုံးကိုခဲယဉ်းနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူမရှိဘဲအမှန်တကယ်သိရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ အစစ်အမှန်အရာအဘို့အဘယ်သူမျှမအစားထိုးရှိပါသည်။ ကာယရေးအရပြောရရင်“ အဲဒါကိုမခံစားရဘူး” လို့ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့စတင်ထိတွေ့နမ်းတဲ့အခါ BINGO, စိုက်ထူခြင်း။ ၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး Rosey Palm နှင့်မတူသည့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူထုတ်လွှတ်လိုက်သောအခြားဓာတုပစ္စည်းများရှိသည်။
အလိုအလျောက်စိုက်ထူနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတကယ့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မသေချာဘူး။ အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့မည်ဟုသင်ခံစားရရန်အပိုဆုတစ်ခုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုရက်အနည်းငယ်မျှမတွေ့ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူတာမရှိဘူး။ ငါ့ရဲ့အရင်ပြtroublနာတွေကြောင့်ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါထပ်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာလား။ ဒါပေမယ့်သူမကိုတွေ့တော့အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ သူမရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့အနံ့ကကျွန်တော့်ကိုလှည့်စေပြီးလိင်တံကအလုပ်လုပ်တယ်။
ငါ Flatlining ကြောင့်ငါစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်, သူမနှင့်အတူမည်သည့်ပြissuesနာများချင်ကြဘူး။ သေချာတာပေါ့, ငါတို့လှည့်စားခြင်းနှင့်ငါခက်ခဲရနိုင်ဘူး။ ငါကအဘို့အတက်စေရန်အသက်အရွယ်အဘို့အသှေးကိုစားရန်အမှတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အခုဆိုရင်မိန်းမတွေကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမရနိုင်ရင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သူမလိုချင်တာကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောပြီးသူမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါစိတ်ခံစားချက်ကိုချက်ချင်းအသတ်ခံရပြီးဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ် (NoFap) ။ ငါသူမကို NoFap နာမည်မပေးခဲ့သလိုတခြားဘာမှမရှင်းပြခဲ့ဘူး။ သူမစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်ရေတွက်လိုက်သည်။ သို့သော်သူကလက်ခံလိုက်သည်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုအချိန်ပေးခဲ့တယ်၊ ခဏကြာတော့ငါသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ငါ့ကိုသုံးကြိမ်မြောက်အောင်ငါဖယ်လိုက်တယ်၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးပျော်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ reboot တစ်လျှောက်လုံးသည်နံနက်ခင်းကောင်းသောသစ်သားခဲလေးများရှိသော်လည်း REAL အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းထားရာတွင်တိုးတက်မှုများစွာကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ နံနက်ယံ၌ဖြစ်ပျက်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိတ်မပူပါနှင့်။ ညအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
(အသက် ၂၁ နှစ်) ဒီမိန်းကလေးနဲ့မတွေ့ဆုံခင်ကျွန်မမှာအလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး (သူကပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ အတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်) ။ တခါတလေအဲဒီမှာခေါင်းကိုက်တာမျိုးခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါပဲ။ သော်လည်းလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါစိုက်ထူရုံတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမ၏ကိုင်ထားရ။ သူမကိုကြည့်ရင်တောင်ငါ့ကိုသွားတွေ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ငါတို့အချို့သည်ကွဲပြားခြားနားစွာတည်ဆောက်ထားခြင်းခံရပြီးလိင်စိတ်ကိုပြန်ရှင်သန်ရန်အမှန်တကယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး လိုအပ်သည်။
ငါအများကြီးအတက်အကျကြုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ Flatlines နှင့် Wetdreams သည်ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ငါကျပန်းမှာအပတ်စဉ် wetdreams ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ယခင်သုက်လွှတ်ခြင်းပုံစံကိုတစ်ပတ်လျှင် ၁-၃x ဆက်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပျက်လျော့နည်းမကြာခဏဖြစ်လာသည်။ ၈ ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့လိင်ဆန္ဒကငြိမ်သက်အေးဆေးစွာရပ်နေခဲ့တယ်။ ပြားချပ်ချပ်ကငါ့ကြောက်စိတ်ပဲ။ ကျွန်တော့်လိင်စိတ်လျော့နည်းသွားတာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်ပထမလိင်ဆက်ဆံမှုကိုစတင်ခဲ့ချိန်မှ (၈ ပတ်မှ ၁၀ ပတ်အကြား) ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုယခင်ကထက်ပိုမိုစွဲစွဲလန်းလန်းသဘောပေါက်ပြီးကတည်းက ED ကိုတွေ့ကြုံရန်မရှိသေးပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ငါ 'flatlines' လို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့တဲ့အရာကတကယ်တော့စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လိင်ဆန္ဒအရစွမ်းအင်ပို့ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအခြားအရာများဆီသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုစွန့်လွှတ်နေသလိုမျိုးယခုအချိန်တွင် ပို၍ သက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ငါပိုမိုမြင့်မားပြင်းထန်မှုနှင့်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အတူငါ၏အလေ့လာမှုများ, အနုပညာနှင့်အစားအစာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်မမှာ libido ဌာနမှာနိမ့်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာရေရှည်အိမ်ထောင်ရေးကနေခွဲထွက်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါ porn ကြိုးစားပေမယ့်လျင်မြန်စွာငြီးငွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါအမျိုးသမီးတစ် ဦး ငါ့အသက်ကိုသို့ရောက်။ , ငါဖုန်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်စကားပြောပြီးနောက်ငါစိုက်ထူနှင့်အတူနိုးလိမ့်မယ်။ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲရှိခဲ့တဲ့အခါ, ငါတို့နမ်းခြင်းနှင့်ချက်ချင်းစိုက်ထူရတဲ့သတိရပါ။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လိင်စိတ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်“ စစ်မှန်သောဘဝ” အခြေအနေများကိုတုံ့ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။ မပါဘဲသေချာပေါက်, ဒါမှမဟုတ်ရုံလေ၌မှုတ်ခံရလိမ့်မည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရသောကျပန်းချိုခြင်းနှင့်ကျပန်းစိုက်ထူခြင်းများသည်လူကြီးဖြစ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုရပ်တန့်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အခြေအနေများသည်အေးဆေးငြိမ်သက်သွားသည်၊ သင်ရရှိသည့်ကျပန်းစိုက်ထူမှုများသည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းတွင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုစတင်သောအခါ၌ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်အချိန်များမှာလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအက်ဒီမာဖီသည်သူ၏ Delirious ဗီဒီယိုတွင်စကတ်တစ်ထည်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်သူမသည်လိင်ဆက်ဆံမှုသိပ်မများသော်လည်းအလွန်ကြီးကျယ်သောချိုင့်ဝှမ်းခြင်းနှင့်ကျပန်းစိုက်ထူခြင်းခံရသည့်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး၏စိတ်ပျက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုပိုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ပိုပြီးစစ်မှန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရတယ်။ ဒါ့အပြင်အသက် ၁၈ နှစ်မှာဒစ်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။
မင်းငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကအတန်းထဲမှာထိုင်နေရင်းဒစ်ကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလား သင်ရုံထိုင်။ သင်၏ဒစ်ကဒီမှာ“ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ” ဟုပြောသည်။ ဤအချက်သည်လူတိုင်းအတွက်တူညီမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်သေချာမသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လူကြီးဘဝသို့ကူးပြောင်းစဉ်ဤပြောင်းလဲမှုကိုသတိမပြုမိခဲ့ပါ၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဟာအနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်တိုင်းစိတ်ကူးယဉ်တတ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ငါဟာအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါအအေးကြက်ဆင်ကိုရပ်တန့်မှသာမှသာငါအမှုအရာကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါရက်ပေါင်း 90 အဘို့အ rebooted ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောရောဂါလက္ခဏာများမရှိခဲ့ပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ပြီး ... လေးနှစ်လုံးလုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ နှစ်များတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့သာဆက်သွယ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် မင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုသံသယဝင်နေရင်စဉ်းစားရန်ခဲယဉ်းတယ်၊ သင်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်မျှော်လင့်ချက်မရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လှည့်စားနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်သင့်ကိုယ်သင်ရသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဖိအားမရှိပါ။
ငါ့မှာပြင်းထန်သောလိင်စိတ်မရှိခြင်း၊ တသမတ်တည်းအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း (၁ မှတ်သားရန်)၊ တသမတ်တည်းနံနက်သစ်သား (ည ၅၀% ခန့်)၊ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ။ ကျွန်ုပ်အတွင်း၌အပြုသဘောဆောင်သောအားသွင်းချက်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည့်အရာကိုသာခံစားမိသည်။ ငါလွန်ခဲ့သောပို့စ်အနည်းငယ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆွဲငင်အားလိုပဲ အခြေခံအားဖြင့်ဆန္ဒကိုအသုံးချနိုင်သောသဘာဝစွမ်းအင်တစ်ခု။ တစ်ခုခုကိုကြည့်ဖို့မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ခုခု (ငါ့လက်မဟုတ်) ခံစားရရန်။ တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခံစားမှု။ ဒါ libido ပိုကောင်းလာမလား။ ကြည့်ကျတာပေါ့။ သို့သော်ပြီးနောက် သည်းခံခြင်း၏ 80 ရက်ပေါင်း နှင့်စိတ်ပျက်, သူကပြောတယ်ဘုရား, ကျွန်မဆက်ဆက်သမျှအဘယ်သူမျှမတိုးတက်မှုများ၏ရှည်လျားသောမိုးခေါင်မှတဆင့်ကိုချိုးဖောက်နေပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးယင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မကိုက်ညီသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စိုးရိမ်စိတ်ပျောက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကျွန်ုပ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိကြောင်းသိရှိခဲ့သည် ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရိုးရိုးလေးပဲအာရုံစိုက်လိုက်တာ။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အဆင်ပြေတယ်!
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တွင် neuropathy သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဆီးချိုရောဂါ (၂) မှတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့မိသည်။ လ2အားဖြင့်ပုံမှန်စိုက်ထူပြန်လာခဲ့ကြသည်။ အများအားဖြင့် flaccid လိင်တံမျှသာမဟုတ်သော်လည်းအမှန်တကယ်အားဖြင့်ကျုံ့နေသည်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ဆုတ်ခွာ” နေပုံရသည့်အတွက်ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုင်ရတာတောင်မှကျွန်တော့်ရဲ့လိင်တံထဲမှာဒီထူးဆန်းတာကသွေးနည်းတယ်၊ ပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ (အတိတ်ကိုရှင်းပြရန်ခက်ခဲသည်။ ) ဤအရာများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ခရီးမရောက်မှီရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂၊ ကျွန်တော့်စေ့စပ်ထားသူကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ ငါသူမကိုတွေ့တဲ့အခါငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးလုပ်ထားတာကိုငါတို့သိတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ပူခဲ့ပြီးသူမ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကျေနပ်မှုရရန်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအစောပိုင်းမှာကျွန်မဟာသူမနဲ့အတူအိပ်ခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးလိင်ဆက်ဆံဖို့စောလွန်းတယ်လို့သူမထင်မြင်စေခဲ့တယ်။ ငါ့အတိတ် ED ကနေငါဖိစီးခံခဲ့ရတယ်။ သူမသည်အံ့သြလောက်အောင်စိတ်ရှည်သည်းခံခဲ့သည်။ ငါ reboot လုပ်တယ်။ ငါတစ်ချိန်တည်းမှာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့် ED အရမ်းဆိုးတယ် ငါစိုးရိမ်ပူပန်နေတုန်းပဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတုန်းပဲ။ သို့သော်သူသည်စိတ်ရှည်သည်။ ငါအပြားအချို့ဖြတ်သန်းသွားလေ၏။ နံနက်သစ်သားတချို့ကိုကျွန်တော်စတင်သတိပြုမိတဲ့အခါငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ငါနှစ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်ရက် ၃၀ အတွင်းမှာသူမကိုနမ်းစဉ်ကစိုက်ထူမှုတွေကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ထိုအခါငါလိင်ကြိုးစားခဲ့ကြောင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီ (၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ) ။
ငါ ၁၀၀+ ထက်ပိုပြီး PMO မရှိဘူး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အချိန်ဖြုန်းနေတယ်။ အားလုံးနီးပါးငါအပြားပြားထဲရောက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၏နံနက်သစ်တောများသည်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုခက်လာပြီးအကြိမ်ရေများလာသည်နှင့်အမျှ libido အနည်းငယ်နှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၇ ရက်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပုံရသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အေးအေးဆေးဆေးအနားယူရသောညတစ်ညနေခဲ့ရသည်။ ကျွန်မတို့အနမ်းတွေတီးထားတာတွေ၊ ထိတွေ့မှုတချို့ကိုအဝတ်အစားတွေနဲ့တို့လိုက်ကြတယ်။ ဒါဟာအံ့ feeling စရာကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပါ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်မမှာလိင်စိတ်တိုးပွားလာတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်တွေမြင့်တက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမရှိသေးပါ - ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်မလုံလောက်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုမရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သောကြောင့် တကယ်တကယ်တကယ် , နမ်း cuddling နှင့် orgasm မပါဘဲရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းလိခ်အားဖြင့်သင့် reboot အရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောနှစ်အတွက်နံနက်သစ်သားမရှိခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုသူတို့ကိုငါပြန်ရပြီ။
ရက်ပေါင်း ၉၀ (အသက် ၃၄ နှစ်) မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့စာရင်းပါ။
ဒါကြောင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာ ၃ လကတည်းကအသစ်ပြောင်းချင်ခဲ့တယ်၊ ငါမြင်ခဲ့တာကမှအပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ပျမ်းမျှအချိန်ဖြစ်ပုံရတယ်။ နှင့်အညီ, ကောင်းစွာ ... အရာအားလုံးစုံလင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်စိတ်မရှိဖူးဟုရိုးသားစွာပြောနိုင်သည်။ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံပဲ၊ အခြားလူကြီးလူကောင်း YBOP မှာရေးခဲ့သလိုပဲတစ်ခါတစ်ရံမှာငါဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်။ အလေးအနက်ထား။ ဒီတစ်ခုလုံးဟာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ငါရက်အနည်းငယ်တိုင်း MO ကိုတကယ်စတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ပဲ။
အားလုံးသည်အလွန်သဘာဝကျပြီးကျန်းမာသည်။ ထိုအခါငါကအကယ်စင်စစ်အဲဒါကို၏ငရဲအဘို့သို့မဟုတ်ငါပျင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါဘူး။ ဒီဆန္ဒကကျွန်တော့်ကိုတကယ်ထိမိတဲ့အခါနဲ့ငါ့ဘဝရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဘယ်တော့မှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပြန်ဖွင့်ရန်သာမကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဒေသမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိအောင်သင်ဖို့လည်းလိုသည်။ ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်များများစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာရယ်စရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာစိုးရိမ်ပူပန်၊ မထိတ်လန့်၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ s ** t လိုခံစားမိကြပြီး၊ ဒီပြseriouslyနာဟာငါတို့ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုကြီးထွားစေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ volumes တွေကိုဖတ်ပြီးရေးခဲ့တယ်။
သို့သော်အဖြေမှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ နောက်ထပ်ဘာမှမတောင်းနိုင်တော့ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့၊ ၃ လကြာမှမင်းရဲ့ခေါင်းထဲကိုရူးသွပ်သလိုစိတ်ပူနေရင်အချိန်ကြာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဝါသနာပါပါ သင်၏စိတ်ကိုအခြားနည်းဖြင့်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်တစ်ခုခုရယူပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုသင်၏ ဦး နှောက်မှဖယ်ထုတ်ရမည်။ ဒီတော့ ... ဒါပါပဲ။ အချက်အလက်အနည်းငယ်:
ဤသည် 110% fixable ဖြစ်ပါသည်*
WE ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်တာတွေပေးနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ ဒါကြောင့် fix ။ *ငါသည်ဤခ / c ကိုငါ 10% နှင့် ပတ်သက်. အစဉ်အမြဲငါ, ငါ့ဟာအကောင်းဆုံး @ ရှိထက်ပိုကောင်းခံစားရလို့ပြော!
တစ်ဦး reboot ပြီးနောက်ပထမဦးစွာလိင်ဆက်ဆံမှု
နောက်ထပ်ကောင်လေးနေ့က 80 မှာဒီအစီရင်ခံစာကိုပေး၏:
ငါပုံမှန်လိင်စိတ်ဖြစ်ရမည့်ရက်နှင့်မည်သို့သွားရသည်မှာတကယ့်ကိုအေးချမ်းသည်။ ရယူ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အဆက်အသွယ်လျှင် horny ။ ဒါ့အပြင်“ horny အတု” လည်းမဟုတ်ပါ၊ အခြားကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေအစားအခြားအရာများလုပ်နိုင်ပေမဲ့ porn ကိုရှာဖွေပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလုပ်ဖို့လိုက်ဖက်တဲ့အတင်းအကျပ်စေခိုင်းတဲ့တိုက်တွန်းချက်ပါ။ ငါအရမ်းရှိသည်ပုံရသည် Chaser ယခုငါသည်ငါ့ဇနီးနဲ့အော်ဂဇင်အခါ။
102 ရက်, 16 နေ့ကချိုး, ငါပြန်သွားပါ။
၁၂/၁၂/၁၂ ငါ ၁၀၂ ရက်ကြာလမ်းလျှောက်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်၊ ရက် ၉၀ လုံးလုံးအပြည့်အ ၀ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးပြီ၊ ခက်ခဲတယ်၊ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ကျင့်သုံးချင်ခဲ့တယ်၊ ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုလုံးဝမရှိ၊ မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်ပင်စသည်တို့
ကျွန်မဘာမျှမခံစားခဲ့ရပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မ ejaculated, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ orgasm Awesome ။ ငါငါးရက်, တူညီတဲ့ရလဒ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ငါနောက်ဆုံး 16 နေ့ရက်ကာလ၌ရှိသမျှသောအချိန်တူညီတဲ့ရလဒ်မျှတသောအကြိမ်အနည်းငယ် fapped ပါပြီ။
ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဦး နှောက်၊ မြူမှုန်၊ အရှက်ကွဲခြင်းကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ / r / nofap ကျွန်တော့်မှာဒီအရည်အချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်၊ သူတို့ကိုငါနဲ့ငါမကွာစေခဲ့ဘူး
ဒီနေ့တော့ဘူးငါ့ကိုအလျှင်းမပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစဉ် fapping ရှင်းရှင်းအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောကွောငျ့ငါပြန်အသက်တာ၏ nofap လမ်းကိုပြန်သွားဖို့ရှေးခယျြ, ငါ့ 25th မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြစ်ကောင်းအခြိနျမှနျမှဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါသေချာငါစစ်ဆေးမှုများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ထောင်ချောက်ထဲသို့ကျမလုပ်ချင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော့်ကိုတကယ်ကူညီခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုမှာတာ ၀ န်ခံမှုရှိသူပါ ၀ င်ခြင်းပဲ၊ ဒီတစ်ခါတော့သူမအခုငါ့ကောင်မလေးဖြစ်နေပြီလေ။ ဒီဟာကကျွန်တော်ဟာတစ်ကိုယ်ရေဘဝမဟုတ်တဲ့ပထမဆုံးမွေးနေ့ပါ။ နှစ်များစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများ မှနေ၍ ရှုပ်ထွေးနေသောအရာအားလုံးမှကျွန်ုပ်၏စနစ်ကိုမဖယ်ရှားဘဲသူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြုမူသည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီကဘယ်ကလဲ ကျွန်ုပ်၏ Streaks နှင့်အတူကျွနုပ်လုပ်လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ဟောင်းကိုရိုက်နှက်ချင်သော်လည်း၊ လာမည့် ၁၀၂ ရက်အတွင်းအဘယ်အရာဖြစ်ပျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ စိတ်ပညာသို့မဟုတ်အကြံပေးခြင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်လေ့လာမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်၊ ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အရာကို နှိပ်၍ ဖြစ်စေသည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်ပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဘ ၀ များ၌ရှင်သန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့စွမ်းဆောင်နိုင်မည်နည်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့၊ ရက် ၁၀၀ ကျော်သွားပြီး၊ တိုက်တွန်းချက်တွေကအရမ်းခက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုငါဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တို့ထဲမှအချို့သောအောင်မြင်သော nofappers များလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် - ၎င်းသည်အဓိကပြproblemနာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် fapping သည်ဒုတိယပြproblemနာဖြစ်သည်။ ငါဘယ်လိုကောက်ချက်ချခဲ့သလဲ အသက် (၂၅) နှစ် - ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်လိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့်ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
ငါ ED မှပြန်လည်ထူထောင်ပြီးနောက်တကယ်ကြီးမြတ်ခံစားခဲ့ရပေမယ့်ရက်ပေါင်းနောက်မှငါနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်လိင်ခဲ့သောနေ့ရက်အဖြစ်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်အဖြစ်မထင်ခဲ့ပေ။ အခုတော့လိင်ပြီးနောက်အောက်ပါလကျထကျရုံလိင်များအတွက်တင်းမာမှုမတွေအများကြီးနှင့်အတူမည်သည့်သာမန်တစ်ရက်နဲ့တူပုံရသည်။ ငါနေဆဲသော်လည်းလိင်ကိုချစ်။ ငါထိ, အ cuddling ခန့်မှန်းခြင်း, နမ်းငါအခုအချိန်မှာပိုပြီးအလိုရှိကြသည်တွင်အရာဖြစ်တယ်။
သင်သည်များစွာသောစည်းမျဉ်းများ (ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ခန့်တွင်) ကိုထိန်းညှိခြင်းခံရသောအခါ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါအမှန်တကယ်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကနေထွက်ပြေးဖို့အပူတပြင်းကြံစည်မှုနဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးမှာသင်အဲဒီကိုမလိုက်ပါဘူး။ ၎င်းသည်သင်၏ဘဝအတွက်အပိုဆုကြေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ရည်းစားနှင့်ထပ်မံရင်းနှီးသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၃၃ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကိုမလုပ်ခဲ့သည့်ရက် ၃၀၁ သည်အခြားအရာများအောင်မြင်ရန်သင်ကူညီနိုင်သည်
နောက်ထပ်ကောင်လေး (အသက် 20):
ဤဖြစ်စဉ်သည်သင့်အားအခြားသူတစ် ဦး ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်အင်္ဂါများသို့သင့်ကိုပြန်လည်စိစစ်ရန်ကူညီပေးမည့်သူနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည် (မှန်ပါသည်၊ ယောနိအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမွေးဖွားလာသည့်လက်ယာလက်သေသေဆုံးသူမှိုရောဂါပိုးမွှားထိုးနည်းမဟုတ်ပါ) ။
နေ့ ၅၂ လောက်မှာ၊ ကျွန်မရဲ့အပြားပြတ်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာသူမကသူမငါ့ကို (ယေဘုယျအားဖြင့် - ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာရော .. y'know) ငါ့ကိုပါတို့ထိဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ သူမစိတ်အားထက်သန်စွာသဘောတူခဲ့တယ် ။ သူမကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးထိတွေ့မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အရာများသည်တကယ်ကိုရှာဖွေလာသည် (pun ရည်ရွယ်ထားသည်) ။ နောက်လတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီးသူမ၏ထိတွေ့မှုကိုအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာငါပြောမယ်၊ ငါခက်မယ်၊ တစ်ခါတလေအားသန်တယ်။ ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်အကြာမှာသူကစိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုပိုမိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အားမကြာခဏထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမနားလည်သည် (ငရဲ၊ သူမြင်သည်အတိုင်းဟဟသည်သူမအတွက်အလုပ်နည်းသည်) ငါဟာပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀-၁၅ ခုံမှာအားပြင်းလေ့ရှိတယ်၊ ပြီးရင်ငတ်တော့မယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနှေးလာပြီးအာရုံခံစားမှုကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်မှာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအကြိမ်များစွာ (ကျွန်ုပ်တို့ဤအချိန်တွင် ~ ၇-၁၀x / အပတ်စဉ်ဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက) ကျွန်ုပ်သည် (၃၀-၄၅) မိနစ်ခန့်သာကြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်အချိန်သည် (porn-related ED မဖွံ့ဖြိုးမီ) ။
ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အခက်ခဲဆုံးခဲ့ကြသည်။ နေ့တိုင်း BonerDay ခဲ့, ငါပယ်ရမယ့်လမ်းအလိုအလျောက်။ ကျွန်မအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာအတွက်အလွန်ဆူဖြိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာပြီးနောက်အမှုအရာကိုပြောင်းလာတယ်။ ငါ asexual ခံစားချက်တွေကို flatlined သို့မဟုတ်မရှိခဲ့ဘူး; အမှုအရာပဲသဘာဝအလျောက်ခံစားရလာတယ်။ ငါနေဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားခဲ့ရပေမယ့်ကျွန်မရဲ့လိင်ထိန်းချုပ်ခဲ့တူသောငါခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးငါ့ကိုအသှငျအပွငျနှင့်မတပ်မက်သောစိတ်အချို့ကို Over-စားသုံးလျှံခဲ့သည်။ ငါသညျလညျးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အများကြီးပိုလူမှုရေးခံစားရတယ်။ ငါမျက်စိထဲမှာလူတွေကြည့်ရှုဖြောင့်တက်ရပျ နေ. , ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ၏အစိုးရိမ်ကွာနွမ်းခဲ့ကြသည်။
(အသက် ၄၀ နှစ်) ပထမတော့ခက်ခဲခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရင်ငါ ED နည်းနည်းခံစားရတယ်။ nofap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အနည်းဆုံးထနိုင်ပြီးစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး၊ သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသူအနည်းငယ်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအားဖြည့်ခဲ့ကြတယ်၊ နောက်နေ့နဲ့အပတ်မှာပိုကောင်းလာတယ်။ အခုတော့အရင်ကထက်ပိုကောင်းတယ်။
အသက် ၂၆ (ED) - ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုသာအာရုံမစိုက်ပါနှင့်။ ပြန်လည်နာလန်ထူအာရုံစိုက်ပေမယ့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်ပါ။
တစ်နှစ်ပြီးနောက်, ဒီကောင်လေး said:
ကျွန်ုပ်၏ ED ပြproblemsနာများမရှိပါ။ တကယ်တော့ကျွန်တော့်ရဲ့ SO ကအရာရာဟာသူမရဲ့ရှုထောင့်ကနေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ် (၂၇ နှစ်ပြန်သွားမယ်) လို့ပြောခဲ့တယ်၊ (သိပ္ပံပညာအတွက်ဤရာထူးအတွက်ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်နေသောကြောင့်သာကျွန်ုပ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ )
ပထမတော့ fapping ကြီးမားတဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျ၏မှန်းဆသိပ်မကြာမီကြီးနှင့်ပြန်လည်တူးအာရုံကြောလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ဖြစ်တယ်သောအခြိနျကာလကိုကျော်။
PE? ပထမတော့ဟုတ်ကဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသူ့ကိုကြက်တစ်ကောင်နဲ့မဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့တဲ့အထိ…သူမကိုကျေနပ်လောက်အောင်ကြာရှည်မခံနိုင်တဲ့ hard ကြက်တစ်ခုအထိဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ ငါထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရရန်အချိန်အနည်းငယ် ... အချိန်။ အခုတော့အဲဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြisn'tနာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တော်တော်လေးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါအခြေခံအားဖြင့်သူမသည်ငါ့ကိုလိုအပ်သည်အထိသွားနိုင်သော်လည်း…လွန်ခဲ့သောညကပင်သူမအတွက်အမှန်တကယ် ၀ င်ရောက်နေသောအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုမလိုချင်သောကြောင့်ငြိမ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုထဲကရ။ အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ပြissuesနာများကို။
အမြဲတမ်းသေခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်ခြင်းမရှိသော၊ ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှု (စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ရပ်စလုံး) သည်ယခင်ကထက် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သည် - ကျွန်ုပ်သည် PIV လိင်ဆက်ဆံမှုကိုစတင်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလအထိ ((အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းအဆုံးသတ်သွားခြင်း) အထိပင်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းများကကြာကြာရေရှည်တည်မြဲနိုင်ဖို့အဝေးကိုထွက်သွားကြဖို့ပြောခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မှားယွင်းတဲ့အကြံပေးချက်ပဲ။
မှန်ကန်တဲ့အကြံဥာဏ်ကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြုသဘောထားခွင့်ပြုပါ။ ထို့နောက်သင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားလှသောပိုမိုပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုများအားလုံးကိုသိမ်းဆည်း။ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးသင်၏မိန်းမကိုကျေနပ်လောက်အောင်ရှည်လျားစွာသွားနိုင်သည်။
ဒါကခဏကြာတယ်၊ စောင့်ရတာပျော်စရာမကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါနှစ်ဆမှသုံးကြိမ်ခံစားရတယ်၊ ငါသူမလိုချင်တာနေသမျှကာလပတ်လုံး ... ငါလိုချင်ရင်အချိန်ကုန်သွားမယ် ... ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး သူမသူမ၏အော်ဂဇင်ရှိခြင်းအဖြစ်အများဆုံးခံစားပါ။
[ကျောလိင်ဆက်ဆံပထမဦးစွာအချိန်] ငါအနိုင်နိုင်2မိနစ်ကြာမြင့်ပေမယ့်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကို (ဖြစ်နိုင်သောအစပျိုးခြင်း) ဖြစ်ပျက်:
၁။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ထုပ်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့သည်။ ၂) ၁၀ မိနစ်အတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ပြီးနောက် ၄၅ မိနစ်အကြာတွင် O ၏အဆက်မပြတ် O နှင့်အတူ energizer bunny ကဲ့သို့ [ဆက်သွားခဲ့သည်] ၃) ၄၅ မိနစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲခဲ့သည်။ အခြား 1-2 အတွင်း 10rd အချိန်။ ၄) သူမသည်ကျွန်ုပ်အားသူမမည်မျှဆိုးဆိုးဝါးဝါးမူးယစ်စေခဲ့သည်။
အဓိကအချက် - အဲဒါကျိုးနပ်တယ်။ ရုံပထမ ဦး ဆုံးပတ်ပတ်လည်အပေါ်သိပ်အလေးချိန်မထားပါနဲ့။
ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအစပျိုးပေးတာကိုသတိပြုမိလာတယ်၊ ဥပမာပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးများသည်အခြား dudes များနှင့်စကားပြောနေတာကိုမြင်ရခြင်း ငါဘာအမှားမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ပြီ။ အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်မပေးသေးဘူး။ ဒါကြောင့်သူမတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့မယ်ဆိုရင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါ့မှာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဒိုင်းလွှားတစ်ခုရှိနေပြီလို့ခံစားရတယ်။ အဲဒီမှာငါစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပြီ။ တော်တော်အေးပါတယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၇၆ ရက်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမရှိသော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကအော်ဂဇင်ကိုအာရုံခံစားမှုဖြင့်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ ငါချိန်းတွေ့ခဲ့ကြသည်နှင့်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်ပျက်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်အမှုအရာထိုလမ်းထွက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ rebooting နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက် PMO'ing ကနေသင်ရထားတဲ့စိတ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဟာအံ့သြစရာပဲ။ ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားတယ်၊ ပိုကောင်းတာတွေကိုမှတ်မိတယ်၊ လူတွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။
ငါကအော်ဂဇင်မရှိတဲ့ရက်ပေါင်း ၇၀ အတွင်းမှာပဲငါ့ရဲ့တဏှာတပ်မက်မှုဟာသူ့ဟာသူအာရုံပျံ့လွင့်သွားတယ်။ ငါလိင်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စသည်တို့ကိုရှာဖွေခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည်လုံးဝမကောင်းသောအမှုအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ပျံ့လွင့်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားလွှတ်ပေးရန်လိုသည်ဟုခံစားမိသည်။ သာအာရုံခံစားမှုနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်။
ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းဖျက်စီးရန်မလိုအပ်ခဲ့, ငါအစိုင်အခဲစိုက်ထူနှင့်အတူအလွန်အမင်းလှည့်ရနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝရောက်ရှိနေပြီးလိင်တံတွင်ရယ်စရာကောင်းသောခံစားမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးအလွန်ကျေနပ်အားရဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ငါနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မလုပ်ချင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလိုက်တာ - ညစ်ညမ်းမှုဆိုတာတစ်ခုတည်းသောရန်သူအမှန်ပါပဲ၊ ငါလုံးဝလုံးဝမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ ဒီနေ့ငါဟာစိတ်ချမ်းသာတယ်၊ မုန်းတယ်၊ မတပ်မက်ဘူး၊
နောက်ထပ်ကောင်လေးနေ့က 90 မှာဒီအစီရင်ခံစာကိုပေး၏:
Sooooooo ငါနောက်ဆုံးစနေနေ့ - 90 ရက် (သင်တန်း၏, porn မပါဘဲ) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအော်ဂဇင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာသိပ်ကိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုလို့မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တကယ်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအလှည့်အပြောင်းပြောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ငါထင်ထားသလိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးမရခဲ့ပေ။ ငါအပြုသဘောသက်ရောက်မှုကိုသတိပွုမိသောကြောင့်, ဒါဟာကျိန်းသေ TIME ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ ဦး ခေါင်းကကြည်လင်တယ်၊ ငါအလုပ်မှာပိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်အတိုင်းငါအခြားရက်သတ္တပတ်တိုင်းစဉ်းစားနေတယ် - ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး တစ်ရက် 119 မှာဒီအစီရင်ခံစာကိုပေး၏:
ယခုတွင်ငါသည်အပျိုစင်မဟုတ် (အသက် ၂၈ နှစ်)၊ PMO ကျော်ဖြစ်ပြီး၊ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောမေတ္တာပြည့်ဝသောရင့်ကျက်သောဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၁ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်ကြားလိင်ဆက်ဆံမှုပြုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းကြာရှည်မခံပါဘူး၊ ကျွန်မတို့ပြီးသွားရင်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကိုလိုချင်နေတာတော့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အမှန်ပါပဲ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ကောင်းသောလိင်နည်းနည်းသည်လုံလောက်ရုံထက်မကပါ။ ငါအပြည့်အဝစိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရပြီးတဲ့နောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးတွေအားလုံးဟာရက်အနည်းငယ်ကောင်းစားဖို့ထိုင်ခုံကိုယူပြီးကျန်တဲ့တစ်ခြားဘ ၀ တွေအတွက်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းမရှိဘဲညစ်ညမ်းခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ အံ့သြစရာကောင်းတာကငါ့ရဲ့အော်ဂဇင်အားလုံးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်ကရှောင်ကြဉ်၊ အရက်သောက်ပြီးစွဲလမ်းခြင်းမရှိသည့်အခါအော်ဂဇင်များသည်တစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ် pmoing ထက်သန်းပေါင်းများစွာပိုကောင်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်၏သုတ်ရည်ယိုစိမ့်မှုသည်ရပ်တန့်သွားပြီဟုယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိရက် ၁၀၀ လောက်ပြီးခဲ့တဲ့မနှစ်ကငါအဓိကပြန်တက်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါဆောင်းရာသီအစောပိုင်းကကျွန်ုပ်အလွန်ဖျားနာခဲ့ပြီး PMO'ing မှ“ မိမိကိုယ်ကိုဆေးကုသခြင်း” ကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ငါ PMO လိုအကြိမ်တစ်ဒါဇင်ခန့်အကြိမ်နှစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်ခြားခြင်းဖြင့်ကွဲကွာခဲ့သည်။ ငါ PMO အခမဲ့ 100-2 ပတ်ကြာသည်အထိဤအချက်သည်အထိ။ ငါအွန်လိုင်းပေါ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ သူကကျွန်မကိုအမြင်အာရုံမကြည့်ပေမဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်မေးဖို့သူမဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီတစ်ခုခုကလစ်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့သူမအနားမှာမတ်တပ်ရပ်နေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်သူမလည်ပင်း / ဆံပင်ကိုအနံ့ခံလိုက်တာကလှည့်ကွက်ပဲ။
ဒါဟာစိတ်ကူးခံစားရတယ်။ ဘုံအကျိုးစီးပွားအချို့ကိုရှာဖွေပြီးကောင်းမွန်သောအချိန်များရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တကယ့်နေ့စွဲတွင်ထွက်သွားခဲ့သည်။ သူမသည် sexy နွေရာသီဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားပြီးညစာစားရန်နှင့်လမ်းလျှောက်ထွက်ရန်ထွက်သွားသည်။ လက်တွေကိုင်ပြီးနမ်းတာ၊ နမ်းတာတွေနဲ့လေးလံတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့ကြသည်။ ငါတညလုံးစိုက်ထူခဲ့တူသောဒါဟာခံစားရတယ်။ ငါထင်တာကငါ P. မှရရှိသောစိုက်ထူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအပြည့်အဝခွန်အား၏ ၇၅% ခန့်ရှိသည်။
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခြင်းနှင့်လက်များကိုင်ခြင်းတို့နှင့်ရိုးရှင်းသောနှောင်ကြိုးအပြုအမူများသည်သေချာပေါက်အကူအညီဖြစ်စေခဲ့သည်။ ငါတိုးတက်မှုအချို့ကိုထပ်မံကြည့်ရှုလိုသောကြောင့်၊ ဒါပေမယ့်အမှုအရာကျိန်းသေအပူရတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ငါအလိုအလျောက်သဘောသဘာဝ (နံနက်သစ်သားရေတွက်) နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကနေအဘယ်သူမျှမစိုက်ထူဖြစ်ကြောင်းမဆိုစိုက်ထူခြင်းမရှိသောကြောင့်, ဤအချက်သည်အထိတက်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သညျ။ အခုတော့ငါတိုးတက်မှုကိုတကယ်မြင်နိုင်ဖို့ 'ရင်းနှီးမှု' ရှိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါဒီမျှဝေချင်တယ်၊ ငါ့ညနေခင်းကိုတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာငါကြာရှည်ခံစားခဲ့ရတာမရှိတဲ့ဒီစွမ်းအင်နဲ့သံလိုက်ကိုငါခံစားခဲ့ရတယ်။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အဘယ်သူမျှမ PMO ၏4လအတွင်းရောကျခါနီးပွီ, ငါတကယ်ငါမ PMO ၏ဤကာလအတွင်းပြောင်းလဲပြီပဲဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့အချို့သောစမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူခဲ့ရသည်နှင့်တူငါခံစားခဲ့ရပြီအစွန်းရောက်ယုတ္တိစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ငါ၏အလိင်စိတ်နေဆဲ flatlining ကြောင့်ငါအမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးညဥ့်ငါလက်ျာဘက်အိပ်ပျော်နေသောမတိုင်မီ masturbate ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အတွက်အသိပေးချက်ကိုငါမညစ်ညမ်း (သိသာတဲ့) မဟုတ်သလိုစိတ်ကူးယဉ်မဆိုမျိုးကိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ငါ့လက်နှင့်မှာအလွန်အလင်းလေဖြတ်။ ကြောင်း Anaconda ချုပ်ကိုင်အဘယ်သူအားမျှ။ ဒီစမ်းသပ်မှု၏အချက်ငါခံစားမှတပါးပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုမဆိုမျိုးမပါဘဲခက်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်။
ခဏပြန်ပြီး၊ ဒီခရီးကိုကျွန်တော်စခဲ့တုန်းကသင့်လက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရုံနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်စွမ်းအချို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ကောင်းသောအညွှန်းကိန်းဖြစ်သည့်အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ, ငါဒီထွက်ကြိုးစားနေအလွန်အံ့သြသွားတယ်။ ၂ စက္ကန့်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်အရမ်းကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊ သို့သော်လည်းငါသည်ဤအစည်းအဝေးကာလအတွင်းအလွန်ကြာမြင့်စွာမနေခဲ့ပါ။ ငါလုံးဝညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် wow နှင့်လုံးဝ wow တုံ့ပြန်မှုများအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့သည်! ဒါကြောင့်ငါတုန့်ပြန်လွန်းခဲ့ပုံပါဘဲ။
၄ လနီးပါးလောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါခဏတာမလုပ်ခဲ့တာကြာလို့မကြာတာကြာနိုင်တယ်။ ငါဒီတစ်ခါကွန်ဒုံးနဲ့ထပ်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ရလာဒ်များမရောက်ရှိမီ, ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ကနေအဘယ်သူမျှမ "chaser" အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်ဟုပြောရန်ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုစိတ်မရှိ၊ ကောင်းပြီ, ဒီနေ့ရဲ့ session ကိုမနေ့ကကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ဒုံးကိုဘာပြသနာမှမရှိဘူး၊ မတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်မှာအရမ်းခက်နေတုန်းပဲ၊ ကွန်ဒုံးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြfinishingနာမရှိဘူး။
အဆိုပါ kegel လေ့ကျင့်ခန်းကျိန်းသေလွန်းချွတ်ပေးဆောင်။ ငါညာလင်းနို့ကိုချွတ်ကာအလွန်ခက်ခဲစိုက်ထူသတိပြုမိနှင့်သိသိသာသာငါအတိတ်ထဲမှာမှတ်မိသောအရာကိုထံမှထက်ညာဘက်အော်ဂဇင်၏အချက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကအနာဂတ်မိန်းကလေးများပျော်ရွှင်စေသင့်ပါတယ်။ 🙂
ငါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်မှာပိုကောင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုခုလိုချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုပေးမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါကိုအောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်ယူမှတ် ငါသည်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနောက်တဖန်မသောက်တော့ပါ၊ တကယ်တော့ခဏတာ (တစ်လခန့်) ထပ်မံရပ်နားရန်စီစဉ်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်လိုသောပြင်းထန်သောလိုမျိုး chaser effect များအတွက်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပါမည်။ ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုမရှိဘူး။
ငါ့လက်ကို ၂ စက္ကန့်လောက်ငါ့လိင်တံကိုဆန့်ထုတ်ပြီးနောက်၊ ဒါကနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာပဲ၊ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုစိုးရိမ်တဲ့သူတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့အခြေအနေပေါ်မလာမချင်းသင်လုံးဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပြီးသင်မသိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာငါ ၂၄/၇ ပတ်လည်မှာစိုက်ထူမှုတစ်ခုနဲ့လမ်းလျှောက်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့က ၁၅ နှစ်မဟုတ်တော့ဘူး
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်မှာကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအခုသိပြီ ဒါကိုရက် ၆၀၊ ၉၀ နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ ဒီဟာကိုမလုပ်နိူင်ရင်စိုက်ထုတ်မနေပါနဲ့။ သင်ကုသရန်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။
reboot လုပ်ဖို့အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး ငါကလူတိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားထင်ပါတယ်။ ၈ ပတ်လောက်ငါမကြောက်မိတဲ့အခါငါတော်တော်လေးစိတ်ပူခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ဆက်လက်ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ ငါတကယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နေပြီးတဲ့အထိပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မခံစားရဘူး။ တံခါးဖွင့်လိုက်တယ်။ ယခုနှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာအကြားတိုးတက်မှုလုံးဝရူးသွပ်သည်။
ငါသည်ငါ့ nofap ခရီးစတင်ခဲ့သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ Umm ငါ၏မရှိခြင်းကြောင့်ရေတွက်ဘယ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသ, များစွာသောမှဦးဆောင်ငါ၏အ ED လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီခြောဆက်ဆံရေးလှူဒါန်းခဲ့သည်။ အသေသတ်ခြင်းကိုချုပ်ကိုင်နှင့်နေ့စဉ်အစဉ်အဆက်မြင့်တက် porn အလေ့အထများစာသားလိင်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ငါအလိုရှိသောထက်ကြောက်ကြောင်းခံထားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
9 လအကြာရှေ့ဆက်အစာရှောင်။ ၈၈ ရက် Streak ပြီးနောက် (၇-၁၁၊ ၂၁- ရက်နှင့် ၃၀ ရက်ဆက်တိုက်) အကြိမ်များစွာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏ ED သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းအစီရင်ခံရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးအပိုင်းပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ sensitivity ဟာအတော်လေးနှောင့်နှေးနေဆဲ (နှစ်ပေါင်းများစွာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော) မှငါဆုံးဖြတ်လိုက်တိုင်းမိန်းမတစ်ယောက်ဟာဆက်ပြီးသွားချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးငါစာသားအတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိခဲ့သောနောက်ဆုံးအမျိုးသမီးနှစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သည်“ အလွန်မြတ်နိုးသူ” ဖြစ်သည်ကိုမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
တစ်ရက် 90 မှာနောက်ထပ်ကောင်လေး:
ငါမနေ့ကငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အထူထောင်ရက်ပေါင်း 90 စိန်ခေါ်မှု၏နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်ငါဟာတခြားလူတွေလိုခံစားရတယ်လို့ပြောရမယ်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားကစားရုံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဌာန်အချို့နှင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ငါစကားပြောဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေကိုစကားပြောဖို့မကြောက်ဘူး။ ငါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီလား၊ ဘယ်သူသိလဲ။ အကြှနျုပျ၏ libido နေဆဲ၎င်း၏အရှိန်အဟုန်တက်နေဆဲငါယခုပိုမိုနံနက်သစ်သားပိုစတင်ရှိသည်။ လိင်မှုကိစ္စဟာအရင်ကမခံစားရဖူးသလိုခံစားရတယ်။
ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလိင်ဆက်ဆံနေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်စူးစမ်းရန်ကစားကွင်းအသစ်တစ်ခုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ Porn ကငါ့ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ဖို့ကျွန်မတစ်ခါမှမကြံစည်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူမပျင်းနေခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလွှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သေချာပေါက်လေ့လာသိရှိခဲ့ပြီးပြီ။ ငါဒီမနက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုဝန်ခံခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်သွားရသောရက်ပေါင်း ၉၀ အတွက်နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားခြင်းမှကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင် sensitivity ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပြန်လာတာသေချာပါတယ်။
အခုငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ကုန်သွားပြီ၊ ကုသမှုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာသေချာပြီ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာလူအချို့ကပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသောနည်းလမ်းများမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏နေရာနှင့်အချိန်ရှိသည်။ လာမယ့်ရက် ၉၀ မှာဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၉ နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်စပြုနေပြီဟုခံစားမိသည်။ အနာဂတ်မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုမစောင့်နိုင်ပါ။
အသက် ၂၉ နှစ် ၄၆ ရက်ရှိအစီရင်ခံစာ။
(နေ့ ၄၆) လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကအနည်းဆုံးတစ်ရက်ကျရင်ငါအပြင်ထွက်နေတုန်းမှာစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအားကောင်းတဲ့၊ သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမက်မှုကိုခံစားရတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်လိုသောဆန္ဒနှင့်ရောစပ်ခြင်းအားကြီးသောတင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံများ။ ဒါကကိုယ့်သဘာဝအတိုင်းအမျိုးသမီးရဲ့ပုံကိုသတိထားမိသလိုပဲ။ ဒါကကျွန်မကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘဲငါ့ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ သငျသညျဖွင့်ပုံကို porn ဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်, သူကပြောတယ်! အကြှနျုပျ၏ penile sensitivity ကိုဇယားချွတ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုမျိုးခံစားခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားမမှတ်မိဘူး။
နေ့ 250 +:
ဒါကြောင့်ငါအငယ်တန်းမြင့်ကတည်းကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိင်သို့မဟုတ် PMO (hardmode) မပါဘဲသွားဖူးတဲ့အရှည်ဆုံးသွား၏။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါင်းနှစ်လုံးနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားခံစားရတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူအားလုံးသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအဆိုးမြင်နေပုံရသည်။ သူတို့ကနည်းနည်းလေးသောပျက်ကွက်မှုအတွက်စိတ်ပူကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဒီကိုစူပါပါဝါလို့မခေါ်ဘဲနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတဲ့ dopamine နှင့်မပျက်စီးစေသည့် ဦး နှောက်ကိုလည်ပတ်နေရုံသာဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိ၊ ငါဖြစ်ပျက်နိုင်ပုံကိုငါ့ ဦး ခေါင်းကတဆင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဇာတ်လမ်းတွေကိုစဉ်းစားမိတယ်။ ငါဆက်သွယ်မှုကိုလိုချင်သောကြောင့်သို့မဟုတ်ငါ fix ကိုလိုအပ်သောကွောငျ့မ။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိအခြေအနေကနေစပြီးစိတ်အားထက်သန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လိင်အကြောင်းမတွေးတောနိုင်တော့တဲ့ကျွန်မရဲ့မအောင်မြင်မှုကြောင့်အတားအဆီးဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ ပိုဆိုးလာတယ်။
ဒီဟာကိုမလှည့်စားဘဲငါဘယ်လိုကုစားနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါမမြင်ဖူးတဲ့အရာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေ၊ မေ့ထားခဲ့ဖူးတဲ့ (သို့) တစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ငါ့ရဲ့အကောင်းမြင်မှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ငါမြင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါမှဆင်းလာသောအခါငါရှိခဲ့ options များကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ငါဒီနေ့လိင်ဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လည်း၎င်းကိုပြီးစီးရန်လိုအပ်သည်ကိုသိသည်။ ငါနှင့်ငါရှာတွေ့သမျှမည်သည့်“ ကံကောင်းသည့်မိန်းကလေး” ကိုမဆိုအလွန်နာကြည်းလိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် fap ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါကအားနည်းလို့မဟုတ်ပြန်လုပ်မိလို့ငါမအောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကခဏတာလိင်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းကိုရပ်တန့်စေချင်တယ်၊ ငါ့စနစ်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒါကကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်လောက်ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲ။
PMO ကကောင်းတယ်လို့မထင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် porn စွဲလမ်းမှုနဲ့ nofap အကြားတင်းကျပ်တဲ့“ မှန်ကန်သော” မျဉ်းကြောင်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တရားကတော့သင်ဟာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုကန့်ကွက်သူတစ် ဦး bratty sex whore မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်၏အချက်ပြမှုများကိုရှောင်ရှားရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။ နေ့ရောညပါပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုနိုးနေရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမင်းကိုတစ်ခုခုပြောနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ၎င်းသည်ဘဝ၏ကောင်းသောအရာဖြစ်ကြောင်းသင့်အားသတိပေးလို။ ဘဝ၌ပျော်မွေ့မှုရှိသည်ကိုသင်မေ့နေသည်ဟုယုံကြည်သည်။
ငါတို့ကတိရစ္ဆာန်တွေမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအုပ်ထိန်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ထဲမှအချို့သည်သင်၏တွန်းအားပေးမှုကိုကျွန်ခံခြင်းမဟုတ် - ၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုလိုက်စားခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့တွန်းအားကိုကိုင်တွယ်ရန်ပါပဲ လိင်မှုကိစ္စကိုသင်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊
အကောင်းဆုံးကတော့သင်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တကယ့်ဆက်ဆံရေးဖြင့်ဤဟန်ချက်ကိုရောက်ရှိစေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလူပျိုတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်လုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောချစ်သူများစပ်ကြားနံရံတစ်ခုချထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လိင်သည်သင်အတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ မင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စိုးရိမ်မှာပါ။ သင်သည်လိင်ကိုမစောင့်နိုင်လျှင်၊ သူမ၏ကျွန်အဖြစ်အပြည့်အ ၀ ရှိလိမ့်မည်။
လူတိုင်းအတွက်မှန်ကန်သောအဖြေရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး တစ်ချို့လူများသည်ရက် ၉၀ ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါ့အဘို့ငါယခုငါလိင်နှင့်အတူအဆင်ပြေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒါကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်မရေချိုးရန်မဟုတ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ယောကျာ်းလေးပြန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံသို့စတင်လာပါကကျွန်ုပ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ fap ကိုတွန်းလှန်ဖို့တိုက်တွန်းချင်တာကိုငါခံစားဖူးရင်ငါရပ်လိုက်မယ်။
ငါ့ fap ကတည်းကငါဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုငါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည် "ပြန်လည်သတ်မှတ်" အပြင်အပြင်ကောင်းတစ် ဦး အပန်းဖြေကာလလိုအပ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အနားယူလို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလွတ်သွားလိမ့်မယ်။ ငါတပတ်လုံးစဉ်းစားခဲ့တဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနည်းတွေ၊ အရင်တုန်းကပြissuesနာတွေနဲ့တူနေတဲ့အရာတွေအရည်ပျော်သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာကြောင့်ပြIနာဖြစ်နေရတာလဲ။ ငါမဖြစ်မီငါ "ဆင်ခြင်တုံတရား" အတော်လေး OCD ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တစ်ရက် 105 မှာနောက်ထပ်ကောင်လေး:
(နေ့ ၁၀၅) အကယ်၍ reboot ကဒီလောက်ကြာလိမ့်မယ်လို့ငါမရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး။ ငါကန ဦး ၇ ပတ်သွားနေခဲ့တုန်းပဲ။ ထို့နောက်ငါလယ်ပြင်၌နှစ်လကြာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးပြောင်းလဲမှုအတော်များများကို - အထူးသဖြင့် ၉ ပတ်ခန့်တွင်သတိပြုမိသည်။ သို့သော်ယခုအမှုအရာကောင်းတစ်လမ်းအတွက်ထွက်ညှိပြီးပုံရသည်။ 'ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကဲ့သို့ချိုလွန်းသော' ရက်ရက်စက်စက်ရက်များကုန်လွန်သွားပြီး 'no sex drive' ရက်များရှိသည်။ ဒီလောက်ဝေးဝေးသွားပြီး (ငါချိန်းတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တဲ့အထိ) နည်းနည်းကြာကြာဆွဲထားတာကိုခံစားရတယ်။ ငါဆိုလိုတာကငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာအရေးမကြီးဘူး။ ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသူနဲ့အတူဒီညပြန်လာချင်တယ်။
တစ်ရက် 60 မှာနောက်ထပ်ကောင်လေး:
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော့်ရဲ့ reboot ထဲရောက်တော့မှန်ကန်တဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကအန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ reboot ကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်လများကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုအောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ငါဒီတစ်ခေါက်မှာကျန်းမာတဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုသတိရှိရှိထုတ်ယူဖို့စဉ်းစားနေသည်။ ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာငါဟာအားကောင်းတဲ့စိုက်ထူမှုအချို့ကိုကိုင်တွယ်နေတဲ့အတွက်စမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရှိလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်သိသောမိန်းကလေးတစ် ဦး အကြောင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကြာမြင့်စွာမယူခဲ့ပါ သို့သော်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် 'ပေါက်ကွဲမှု' သို့မဟုတ်စူပါအော်ဂဇင်မရှိပါ။ ၎င်းသည်ယခင်ကကဲ့သို့ပြင်းထန်မှုမရှိသကဲ့သို့ဖြန့်ချိမှုမှာများများစားစားရှိသော်လည်းမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကြီးမားခြင်းမရှိခဲ့ပါ (သုက်ရည်ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးသောအပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများရှိသည်ဟုထင်သည်) ။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ ရုံညာဘက်အချိန်တွင်။
ယခုအချိန်အထိအဘယ်သူမျှမရက်နာခံစားမှု။ အကယ်၍များ အားလုံးရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်၏ reboot အပေါ်အဓိကဂယက်ရိုက်မှုများမမျှော်လင့်ပါ။ ငါတကယ်မျှော်လင့်မထားဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်သက်သောင့်သက်သာရှိလို့ပဲ။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုမည်သည့်တိုက်တွန်းမှုသို့မဟုတ်မူးရူးကဲ့သို့အပြုအမူကိုရှောင်။ နောက်တစ်လအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပါဘဲအလွယ်တကူသွားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။ ဒါဟာသဘာဝကျတယ်၊ အခုစိတ်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးတွေကိုအာရုံမစိုက်ပုံရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းခံရသည်ဟုမခံစားရပါ။ (၈၈% ပိုများသည်) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုယခုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ငါ့ဘဝရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှာလှပတဲ့တိုးတက်မှုများစွာကိုငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ယခုငါကျပန်း porn နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်။ သူတို့ကိုငါအခုချန်ထားလိုက်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာသူတို့ပြန်ပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
ဟေ့ယောက်ျားတွေအရာကောင်းစွာသွားပါပြီ။ ကျွန်မအကြောင်းကို 90 နေ့ရက်များများအတွက်ရှောင်ပြီးနောက်နောက်တဖန် masturbating စတင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်ကြှနျတေျာ့နောက်ဆုံးဘလော့ entry ကို။ ကျွန်မအကြောင်းကိုနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ဤအမှုကိုပြု၏။ ငါ masturbating စတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါပြန် Mary Jane တက်ကောက်နေစတင်
ငါကပိုစိတ်ဓာတ်ကျငါလေနှင့်ငါ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်နောက်တဖန်အထွတ်အထိပ်သို့, ပိုမိုငါ masturbated သတိပြုမိသည်။ ပထမတော့မရှိ Chaser ခဲ့ပေမယ့်ပိုပြီးကိုယ်ကပို crappy ငါခံစားရတယ်ခဲ့ပိုကောင်းခံစားရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကပို masturbate ဖို့ဖြစ်တယ်။
ငါ ၁၀၉ ရက်ကြာတဲ့ porn မသွားဘူး ဒီဟာငါစပြီးကတည်းကငါ porn မပါဘဲအရှည်ဆုံးပဲ။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်သောအခါ၎င်းကိုထပ်မံကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲဖြတ်သန်းသွားသည် (ဦး နှောက်က“ တစ်ကြိမ်မှမနာကျင်နိုင်ပါ…”) ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn သည်မြေပဲထောပတ်နှင့်ဂျယ်လီကဲ့သို့…ကောင်းကင်၌ပြုလုပ်သောပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရှာဖွေနေတာကိုခံစားမိတယ်။ ဤအရာသည်ဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောအမှိုက်များ (အမှတ်တရများ၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာများ) သွားသောနေရာတစ်ခုရှိသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငြင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါငါ့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရတယ်။ လိုပဲမရှိတော့ဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကသဘောပေါက်လာတယ်။ ခင်ဗျားလက်ခုပ်တီးတာနဲ့တူတယ် ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကလက်တွေကြားကတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်လေကလွဲလို့ဘာမှမကြားဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ငါမရှိတော့ကြောင်းစွဲရှိသည်ပျော်ရွှင်သည်။
ငါနေ့ 19 မတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာကိုငါပြီးသားပိုကောင်းခံစားရသည်။ တဖန်ငါ Lucid ခံစားရရန်စတင်နှင့်အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်နေပါတယ်။ ငါ၏အအိပ်မက်တစ်ဖန်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်လာရသည်။
“ NoFap” ၁၄၁ ရက်ပြီးနောက်
NoFap ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ ယုံကြည်မှု၊ ရည်မှန်းချက်နဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာငါ့ရဲ့တစ်သက်တာမှာအခြားသူတွေထက်အများကြီးနည်းပေမယ့်ငါ့ရဲ့စိတ်ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်။ ငါသံသရာပျက်သွားသည်ကိုယုံကြည်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ၌ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလက်လွတ်သွားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမမြင်တွေ့လိုသောဆန္ဒမရှိတော့ပါ။
ငါကရက် ၁၀၀ လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအရာရာတိုင်းဟာပြောင်းလဲသွားပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာပြီးအမျိုးသမီးတွေကငါ့ကိုဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကတော်တော်လေးတိုးတက်လာခဲ့တယ် (ငါအဲဒီမှာနေထိုင်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိနေသေးတုန်းကငါလည်ပတ်ချိန်တုန်းကငါဟာမိန်းကလေး ၄ ယောက်၊ ငါ့မြို့က ၂၊ Las Vegas မှာ ၂ ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတယ်) ။ အိပ်ရာထဲမှာကြာကြာအိပ် ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ချိန်များတွင်အလုပ်ပိုလုပ်သည်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသားအရေပိုမိုသက်တောင့်သက်သာခံစားရသည်နှင့်ငါအရင်ကထက်စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သည်။
ငါ ၁၀၀ ကနေသုံးကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ် (ဘယ်တော့မှ porn နှင့်အတူ) ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ NoFap တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း” အဖြစ်မထင်တော့သော်လည်း ၁၄၁ တွင်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ငါက 141 မှာ reset သို့မဟုတ်သော့ခတ်ဖို့ရှိမရှိသို့မဟုတ်သောအရာကိုသို့မဟုတ်မသိရပါဘူး ...
ကျွန်တော့်မှာနည်းပညာအရထူးခြားတဲ့အခြားအရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ ယခုငါမိန်းကလေးငယ်များနှင့်မကြာခဏချိတ်ဆက်မိသည်၊ အကြိမ်များစွာကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိစ္စမရှိဘဲသွားပြီးရက် ၁၀၀ အများစုမှမရှိဘဲသွားခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်ဟုခံစားရသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကောင်းဘူးမဟုတ်ပေမယ့်မင်းကထိန်းထားဖို့လိုတယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ပထမ ၁၀၀ ရက်ကျော်လွန်ပြီးမှ ၃ ကြိမ်သာငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ အတွေးတစ်ခုကိုကျော်လွှားလိုက်တဲ့အခါငါသာအခြေခံအားဖြင့်လုပ်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အနားယူရန်၊ အိပ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပျင်းနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်လုပ်သောအရာမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သင်ရရှိရန်လိုအပ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသောကြောင့်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အထိရောက်ဖို့လိုသည်၊
လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ရာ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာကြီးပင်ဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိ။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်အားကောင်း။ ဆက်သွယ်မှု (နှုတ်ဖြင့်ရောနှုတ်ဖြင့်) အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ သူမပြောတာကငါဟာသူမပျော်ရွှင်မှုကိုပေးရတာကိုအပြည့်အ ၀ နှစ်သက်တယ်၊ သူမကကျွန်မတို့လုပ်နေတာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြနိုင်တယ်။ ဒါကပျော်ဖို့ကောင်းတယ် အဲဒီနောက်ငါကနေကျေနပ်မှုနှင့်အပြည့်အဝခံစားရတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာဒီကိစ္စကိုတကယ့်ကိုတကယ့်ကိုချိုမြိန်တဲ့အတွေးတွေရလာလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုဘာမှမဖြစ်စေရဘူး။ ငါလာမယ့်အချိန်အတွက်ဒီစွမ်းအင်ကိုချွေတာလိုက်တော့ပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်။
Day 135 - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်
ဒီတော့နေ့ ၁၃၅ ရက်နေ့မှာငါနောက်ဆုံးတော့ဥမင်ထူထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာသော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး“ ဒီဗီဒီယိုကငါ့အတွက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး” လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့အခြားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုကဒါကိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ငါနောက်ထပ်တစ်ခုကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုစီကို ၁၀-၂၀ စက္ကန့်အတွင်းသာကြည့်ခဲ့သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာမမှန်ကန်ဘူး ဒါဟာငါ့အဘို့အမြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ porn ကအကောင်းဆုံးမှာ creepy ခံစားရတယ်။ လူတွေဟာလိင်ဆက်ဆံတာကိုကြည့်ရတာအရမ်းထူးဆန်းတယ်။ တတိယဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါဒါကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်၊ သမိုင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာကိုငါပိတ်လိုက်တယ်။ ငါ Moing ကိုထိလိုက်တော့စိတ်ကျေနပ်စရာပဲ။
Porn မှာငါနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခံစားချက်မရှိခဲ့ပါ။ ငါကြည့်တာမှမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်လို့မထင်ဘူး။ ငါတကယ်ယုံကြည်မှုရှိနေတုန်းပဲ၊ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကိုကြောက်ရွံ့တယ်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို“ မျက်နှာ၌” ကြည့်လို့ရလို့ငြင်းလို့မရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါအားကစားခန်းမကိုသွားပြီးတွေးတောဆင်ခြင်ရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်တော့ကျန်းမာတဲ့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာဟာငါ့အတွက်သိပ်ပြီးချစ်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။ တစ်ခါတလေစိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ အကျင့်ဟောင်းတွေနဲ့ထပ်တူပြန်ဖြစ်တော့မယ်၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လာရတယ်၊ ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
နေ့ ၈၀ - ဒုတိယ reboot:
သငျသညျလိင်ဆက်ဆံပြုကြတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းသွားနှင့်လိင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူအခါတိုင်းပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။ သငျသညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရန်ရှိသည်များနှင့်အလေ့အကျင့်စုံလင်သောစေသည်။ ပိုများသောအကွံဉာဏျ: (၂၁) နှစ် ၂၁ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနှင့်နောက်ဆုံးပြန်စခြင်းဖြစ်သည် နီးပါးသည် ED မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။
penile စိုက်ထူအတွက် Dopamine oxytocin interaction က